बहुप्रतिक्षीत टाटा अल्ट्रोज प्रिमियम ह्याचब्याक नेपाली अटोबजारमा
काठमाण्डौ । नेपालका लागि टाटा मोटर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा.लि.ले बहुप्रतिक्षीत तथा चर्चित प्रिमियम ह्याचब्याक टाटा अल्ट्रोजको डिजिटल प्रबिधि मार्फत आजदेखि नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । प्रिमियम ह्याचब्याक सेग्मेन्टको रुपमा यसैबर्षको शुरुवातमा भारतमा सार्वजनिक भएदेखि नै टाटा अल्ट्रोजले अत्याधिक...
काठमाण्डौ । नेपालमा विद्युतीय वाहनको क्रमिक विकासतर्फ अर्को कदम अघि बढाउँदै दिगोले आफ्नो विद्युतीय सिटी कार दिगो इ८ को बुकिङ सुरु गरेको छ । दिगो नेपालको मोबिलिटी क्षेत्रलाई रुपान्तरण गर्ने भिजन बोकेको नयाँ ऊर्जा कम्पनी हो । यो कम्पनी यात्रा गर्ने अझ बढी जिम्मेवार विधि छ भन्नेमा विश्वास गर्दछ र यसैलाई चीरस्थायी बनाउन प्रतिबद्ध छ ।...
केटीएमको अपग्रेडेड बीएस सिक्स बाइक आज लन्च हुँदै, कति पर्छ मूल्य ?
काठमाण्डौ । विश्वको नम्बर १ र नेपालको सर्वाधिक तीव्रगतिको प्रगतिशील प्रिमियम मोटरसाइकल ब्रान्ड केटीएमले आज बीएस सिक्सको मोडल एकदमै नयाँ २०२० रेन्ज लन्च गर्ने घोषणा गरेको छ। 2020, KTM 200 DUKE लाई पूर्ण रुपले अपग्रेड गरिएको छ। जुन शानदार १२९० सुपर ड्युक—आरबाट प्रेरित छ। यस बाइकको एकदमै नयाँ अनि ज्यादै हलुका स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम, ट्याङ्क र...
निषेधाज्ञाप्रति नाडाको धारणा– ‘अब अति भयो, समयलाई बुझौँ, संसारलाई नियालौँ र काम गरौँ’
काठमाण्डौ। नाडा अटोबोमाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले सरकारलाई निषेधाज्ञाबारे पुनर्विचार गर्न सरकारसँग अपिल गरेको छ। नाडाले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामको अन्तिम अस्त्र निषेधाज्ञा वा लकडाउन नभएको भन्दै पुनर्विचार गर्न सरकारसमक्ष अपिल गरेको हो। ‘यो कोरोना संक्रमणका विषयमा विश्वमा आवश्यक अध्ययन र...
६ रुपैयाँमै १ किलोमिटर गुड्ने होण्डाको नयाँ कार, मूल्य र फिचर्स यस्ता छन्
नयाँदिल्ली । भारतले होण्डा कार हैचब्याक मोडल ज्याजको नयाँ भर्सन लञ्च गरेको छ । कम्पनीकाअनुसार यस मोडलको म्यानुअल भर्सन ७.४९ देखि ८.८३ लाख भारतीय रुपैयाँमा उपलब्ध हुनेछ । जबकि यसको सीभीटी अटोमेटिक भर्जनको मूल्य ८.४९ देखि ९.७३ लाख भारतीय रुपैयाँको बीच हुनेछ । नेपालमा भने यो कार निकै महंगो पर्नेछ । होण्डा कार इण्डियाका अध्यक्ष तथा सीइओ...
हिरो मोटोकर्पको परिस्कृत 'सुपर स्प्लेन्डर' बाइक नेपाली बजारमा, यस्ता छन् फिचर्स
काठमाण्डौ । मोटरसाइकल तथा स्कुटरको विश्वको सबैभन्दा ठूलो निर्माता हिरो मोटोकर्पले रोमाञ्चक र सुरक्षित श्रेणीका उत्पादनप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आजबाट अत्याधिक लोकप्रिय सुपर स्प्लेन्डरको नयाँ अद्यावधिक संस्करण बजारमा ल्याएको छ। सुपर स्प्लेन्डर अब अझ सुरक्षित र एकीकृत ब्रेक प्रणाली (आईबीएस) सहित थप सुरक्षित भएको छ।...
लुसिड मोटर्स शानदार इलेक्ट्रिक कार ल्याउँदै, कति पर्ला मूल्य ?
काठमाण्डौ । लुसिड मोटर्सको धमाकेदार इलेक्ट्रिक कार बजारमा आउने तयारीमा छ। कम्पनीले यो इलेक्ट्रिक कार लुसिड एअर रेन्जको मामिलामा सबैभन्दा अगाडि हुने दाबी गरेको छ। यसका साथै कम्पनीले यो इलेक्ट्रिक सेडान “लुसिड एअर” सबैभन्दा तीव्र चार्ज हुने इलेक्ट्रिक कार हुने घोषणा गरेको छ। लुसिड मोटर्सले यो कार १ मिनेट चार्ज गरेपछि ३२...
टाटाका व्यवसायिक गाडी अब अनलाइनबाटै खरीदबिक्री गर्न सकिने, सुरु भो भर्चुअल सोरुम
काठमाण्डौ । टाटा मोटर्सका व्यवसायिक गाडी बिक्रीवितरणका लागि सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.लि.को आधिकारिक डिलर शशिला मोटर्स प्रा.लि.ले गाडी खरिदका लागि अनलाईन सुविधा दिने भएको छ । प्रा.लि.ले कोभिड १९ का कारण विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने भएकाले घरमै बसेर आफूले खोजेको गाडी बुकिङ गर्न मिल्ने सुविधाको शुभारम्भ गरेको हो । यससँगै अब उपभोक्ताले टाटाका...
काठमाण्डौ । भारतमा मारुती ब्रेजा आफ्नो सेगमेन्टमा लगातार दोस्रो महिना पनि पहिलो रोजाईको कार बन्न सफल भएको छ। भारतीय बजारमा गत जुलाईमा यो कार ७ हजार ८७० युनिट बिक्री भएको छ। गत वर्ष यही अवधिमा यो कार ५ हजार ३०२ युनिट बिक्री भएको थियो। अर्थात् यो कारको बिक्री ४७.२५ प्रतिशतले बढेको छ। हुन्डईको भेन्यूलाई पछाडि पार्दै मारुतीको ब्रेज्जा...
काठमाण्डौ । कोरोना महामारीका कारण पहिलोपटक कार किन्ने र दोस्रो वा अतिरिक्त कार किन्ने ग्राहकका संख्या बढेको पाइएको छ। भारतको सबैभन्दा ठूलो कार कम्पनी मारुती सुजुकीका अनुसार यो महामारीका कारण मानिसहरुले अहिले सार्वजनिक सवारीसाधनमा भन्दा आफ्नै गाडी प्रयोग गर्न चाहिरहेका छन्। महामारी सुरु भएयता जुलाईमा कारको बिक्री बढेको पनि...
काठमाण्डौ । कियाले भारतमा डेब्यु गरेको ११ महिनाभन्दा थोरै बढी अवधिमा एक लाखभन्दा बढी एसयुभी बिक्री गरेको जनाएको छ । कियाले सन् २०१९ को अगस्टमा आफ्नो पहिलो मोडल रुपमा सेल्टोस भारतीय बजारमा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसयताको अवधिमा किया सबैभन्दा तीव्र गतिमा एक लाख थान एसयुभी बिक्री गर्ने अटोमेकर बन्न सफल भएको हो । कोरियाली अटो...
नेपालमा सुजुकीको पेट्रोल इन्जिनयुक्त शानदार नयाँ ‘भिटारा ब्रेजा’ सार्वजनिक, कति पर्ला मूल्य ?
काठमाण्डौ। नेपालका लागि सुजुकी ब्रान्डका कारको आधिकारिक बिक्रेता तथा सीजी होल्डिंग्स्को अटोमोटिभ डिभिजन सीजी मोटोकर्पले नेपाली बजारमा नयाँ पावरफुल र स्टाइलिस भिटारा ब्रेजा सार्वजनिक गरेको छ। स्पोर्टी र बोल्ड लुक्सबाट सज्जित सुजुकीको नयाँ कम्प्याक्ट एसयूभीमा प्रिमियम इन्टेरियरका साथै ‘फस्ट–इन–क्लास’ फिचरहरु रहेका छन्।...